चीन 20000W Foldable Brushless मोटर patinete electrico इलेक्ट्रिक स्कूटर निर्माता र आपूर्तिकर्ता | हाइबा
20000W Foldable Brushless मोटर patinete electrico इलेक्ट्रिक स्कूटर
कहिले सम्म इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु अन्तिम?
इलेक्ट्रिक स्कूटर को आयु व्यापक रूप मा भिन्न हुन्छ
बिजुली स्कूटरहरु एक अपेक्षाकृत छोटो अवधिको लागि सडक मा भएको छ। जब देखि उनीहरुको परिचय मानिसहरु उनीहरुलाई घृणा गर्न थाले, अरु उनीहरु संग माया मा परे। कुनै फरक पर्दैन कि तपाइँको विचार के हो, तपाइँ अझै पनी जान्न रुचि हुन सक्छ कि कहिले सम्म एक ठेठ ई स्कूटर अन्तिम रहनेछ, खास गरी यदि तपाइँ एक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ।
ठीक तरिकाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को जीवन को बारे मा छलफल गर्न को लागी, उनीहरु लाई पहिले राइडशेयर र निजी स्वामित्व वाला स्कूटर मा अलग गर्नु पर्छ, किनकि दुई समूहहरु बीचको आयु मा अन्तर जबरदस्त छ।
अधिकतम गति 150-155 किमी/घन्टा（80MPH-90MPH）
अधिकतम लोड २0० केजी
अधिकतम माइलेज (ब्याट्री अनुसार तपाइँ छनौट गर्नुहोस्) 100-110KM (40Ah ब्याट्री)
15०-160KM (80 एएच ब्याट्री)
वैकल्पिक १: पूर्वनिर्धारित सडक टायर (हाल मात्र सडक टायर) २: अपग्रेड प्रवाह बायाँ र दायाँ मोड संकेत (+USUSD)
एक बिजुली स्कूटर को औसत आयु
शेयर इलेक्ट्रिक स्कूटर 1-5 महिना को एक औसत आयु छ। उचित हेरचाह र रखरखाव संग निजी स्वामित्व वाला ई स्कूटर कम्तिमा 2-3 बर्ष सम्म रहन्छ, सम्भवतः धेरै लामो।
माथि संख्याहरु छन् कि म संग आए र यहाँ के मैले उनीहरुलाई प्राप्त गर्न को लागी गरीएको छु। चूंकि शेयर कम्पनीहरु आफ्नो इलेक्ट्रिक स्कूटर बेडा को दीर्घायु को बारे मा जानकारी प्रकाशित गर्दैनन्, म एक बिट गहिरो खोज। मैले एउटा सानो राइडशेयर कम्पनी यूरोप मा संचालित (दुबै तातो र चिसो जलवायु संग देशहरुमा) कि सक्रिय रूप मा एक मताधिकार को आधार मा लगानीकर्ताहरु लाई पछ्याउँदै थिए। उनीहरु प्रत्येक स्कूटर को लागत, संभावित मुनाफा सूचीबद्ध, तर उनीहरु पनि "लगभग ५ महिना" मा एक ई स्कूटर को आयु सूचीबद्ध। यो जानकारी विश्वसनीय हुन पर्छ, यदि केहि छ, मँ मान्दछु कि वास्तविक संख्या5महिना भन्दा थोरै कम हुन सक्छ। आखिर, उनीहरु लगानीकर्ताहरुलाई बेच्न को लागी कोशिश गरीरहेका छन्, त्यसैले उनीहरु लाई एक उज्ज्वल तस्वीर प्रस्तुत गर्न को लागी छ, तर एक कि अझै यथार्थवादी छ।
अर्कोतर्फ, त्यहाँ एक विश्लेषण को एक अनलाइन प्रकाशित रिपोर्ट थियो जसको अनुमान छ कि एक बर्ड ई स्कूटर को औसत आयु मात्र एक महिना को शर्मीली छ। यो एक उचित खोज र सुरु मा एक बिट स्तब्ध छ, तर एक खाता मा लिइएको छ कि समय मा, बर्ड स्टक Xiaomi M365 ई स्कूटर, जो कुनै पनि खाता द्वारा भारी शुल्क छैन। तब देखि, बर्ड र अन्य धेरै अनुकूलित ई स्कूटरहरु कि अधिक टिकाऊ संग आफ्नो बेडा bulked छन्। जे होस्, मेरो अनुमान मा सत्य थप्न को लागी मैले ई स्कूटर लाई १ देखि ५ महिना को आयु दिने निर्णय गरें, किनकि यि संख्याहरु हुन् जुन वास्तव मा अवस्थित छन्।
निजी स्वामित्वमा ई-स्कूटर एक बिल्कुलै फरक जीवनकाल छ कि कहीं कहीं नजिक सवारी सवारी कम्पनीहरु को रूप मा छोटो छ। ई-स्कूटर मा ठूलो नामहरु मध्ये एक, Xiaomi M365, लगभग ३ बर्ष को लागी वरिपरि रहेको छ। त्यहाँ धेरै मानिसहरु आफ्नो ई स्कूटर डम्पिंग को रिपोर्ट छैन। मलाई लाग्छ कि यो यस तथ्य को कारण हो कि निजी मालिकहरु लाई आफ्नो बिजुली स्कूटर को एक राम्रो हेरचाह को कारण हो। जाहिर छ व्यक्तिगत भागहरु बिच्छेद र निश्चित गर्न को लागी आवश्यक छ, तर म व्यक्तिगत रूप मा कसैलाई थाहा छैन जसको M365 मात्र अत्यधिक प्रयोग बाट मर्नेछ। धेरै जसो मामिलाहरुमा, स्कूटरहरु को रूप मा भारी रूप मा आफ्नो राइडशेयर समकक्षहरु को रूप मा प्रयोग गरीदैन, त्यसैले उनीहरु धेरै लामो समय सम्म।
बिजुली स्कूटर को आयु घटाउने कारकहरु
शेयर ई स्कूटर धेरै समय बाहिर बाहिर राखिएको छ। तिनीहरू व्यापार को उपकरण सक्रिय रूप मा संलग्न, वर्षा वा चमक हो। ध्यान दिँदै कि उनीहरु पनरोक छैनन्, धेरै जसो IP54 मूल्या rated्कन गरीएको छ, यो मात्र समय को कुरा हो जब पानीले यसको बिजुली घटक नष्ट गर्दछ। पानीले बिजुली मोटर, ब्रेक र व्हील बियरिंग्स लाई पनि नकारात्मक असर पार्नेछ।
पानी बाहेक, ई-स्कूटरहरु पनि धुलो संग उजागर छन्। साना कणहरु जो सानो nooks र crannies मा आफ्नो बाटो भेट्टाउनेछन्। जब धेरै धूलो बिजुली मोटर को घटक मा जान्छ, स्कूटर गम्भीर क्षतिग्रस्त हुन सक्छ।
तापक्रम चरम सीमाले पनि भूमिका खेल्छ। लिथियम-आयन ब्याट्री सजीलै क्षतिग्रस्त हुन सक्छ यदि धेरै उच्च तापमान संग उजागर। बिजुली मोटर, अर्कोतर्फ, कडा मेहनत गर्न को लागी चिसो तापमान मा संचालित गर्न को लागी आवश्यक पर्दछ।
शेयर ई स्कूटर फुटपाथ र व्यस्त सडकहरु सहित लगभग कहीं पनि पार्कि being को लागी कुख्यात छन्। एक पटक पार्क गरेपछि, उनीहरु तल झर्छन् प्राय: कडा कंक्रीट फुटपाथमा हिर्काएर। यी सबै झटकाहरु बाट उनीहरुको आयु घट्छ।
अर्को कारक जुन निस्सन्देह एक ई स्कूटर को एक छोटो जीवन को लागी नेतृत्व गर्दछ लापरवाह सवारी हो। धेरै धेरै मानिसहरु बस सवारी सवारी इलेक्ट्रिक स्कूटर कि उनीहरु सवारी गरीरहेका छन् बारे मा परवाह छैन। अधिक वजन, potholes, चट्टान र curbs सबै एक ई स्कूटर को एक छोटो जीवन को लागी योगदान र विचार गर्नु पर्छ।
अधिक सवारी सुझाव जान्नुहोस्।
बिजुली स्कूटर भागहरु कि तोडिन्छन्
ब्याट्री। तिनीहरूको प्रकार्यको आधारमा, ब्याट्रीहरु दुई कारणहरु को लागी ब्रेक को लागी प्रवण छन्। पहिलो, प्रत्येक ब्याट्री चार्ज चक्र मा दिईएको एक आयु छ। प्रत्येक पटक तपाइँ पुरा तरिकाले एक पूर्ण चार्ज ब्याट्री निर्वहन, तपाइँ आफ्नो जीवन बाट एक चार्ज चक्र गुमाउनु भयो। तेसैले, यो केवल समय को कुरा हो जब सम्म ई स्कूटर लिथियम आयन ब्याट्री प्रतिस्थापन को आवश्यकता पर्दैन।
दोस्रो कारण ब्याट्री प्रतिस्थापन गर्न को लागी आवश्यक हुन सक्छ कि यो शारीरिक रूप बाट क्षतिग्रस्त हुन सक्छ। कुनै न कुनै सवारी, वर्षा मा वा puddles वा झरना को माध्यम बाट सवारी, सबै शारीरिक रूप बाट ब्याट्री लाई हानि गर्न सक्छ। उदाहरण को लागी मेरो M365 लिनुहोस्, ब्याट्री स्कूटर को आधार मा स्थित छ। यो केवल एक आधार प्लेट आवरण द्वारा तत्वहरु बाट सुरक्षित छ। वास्तविक ब्याट्री सेलहरु स्पष्ट प्लास्टिक को रैप मा लपेटिएको छ, जो थोरै सुरक्षा प्रदान गर्दछ।
रियर लाइट र तारि। केहि ई-स्कूटरहरु एक रियर प्रकाश फेंडर मा माउन्ट संग सुसज्जित छन्। यो ब्याट्री बाट एक तार को माध्यम बाट जोडिएको छ कि फेंडर को भित्री पक्ष मा चल्छ, ब्याट्री र फेंडर को बीच मा। यो एक धेरै सामान्य समस्या हो जसमा तार टायर द्वारा क्षतिग्रस्त हुन्छ र पछाडि प्रकाश काम गर्न बन्द हुन्छ। यो पनि एक सर्ट सर्किट र बिजुली प्रणाली को अन्य भागहरु लाई हानि गर्न सक्छ। सौभाग्य देखि, त्यहाँ कस्टम रक्षकहरु बजार मा उपलब्ध छन्, कि तार को रक्षा गर्नेछन्।
ह्यान्डलबार। अधिक विशेष गरी, कुञ्जी कि तह तंत्र को भाग हो ढीला वा समय संगै तोड्ने को लागी जान्छ। केहि प्रयोगकर्ताहरु यो रिपोर्ट को रूप मा प्रयोग को पहिलो केहि महिना को रूप मा थोरै भित्र रिपोर्ट। अरुले लामो समय (> १ बर्ष) को अवधि पछि यो अनुभव गरेका छन्। जे होस्, यो एक गम्भीर सुरक्षा मुद्दा हो जब यो हुन्छ तब कुनै फरक पर्दैन। यो aftermarket मा उपलब्ध केहि फिक्स छन्।
रियर फेन्डर। रियर माउन्ट गरिएको फेंडर धेरैजसो इलेक्ट्रिक स्कूटरहरुमा एक चल भाग हो। यो विरलै अतिरिक्त समर्थन द्वारा सुरक्षित छ। कुनै पनी तरिका, यदि तपाइँ होशियार हुनुहुन्न भने यो तोडिन्छ। यो टुट्छ जब एक बल पक्ष बाट लागू हुन्छ। सैद्धान्तिक रूप मा तपाइँ अझै पनी फेंडर बिना तपाइँ बिजुली स्कूटर को सवारी गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाइँ टायर र स्कूटर को आधार को बीच मा तपाइँको खुट्टा टाँस्न सावधान रहनु पर्छ। तपाइँ गन्दा पनि पाउनुहुनेछ, विशेष गरी यदि तपाइँ गीला अवस्थामा सवारी गर्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्। त्यहाँ अतिरिक्त फेंडर समर्थन छ कि तपाइँ अनलाइन बाट यो मुद्दा हुन बाट रोक्न खरीद गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक फेरी, यो मात्र ती मोडेलहरु कि फेन्डर को लागी साइड समर्थन बिना आउन को लागी लागू हुन्छ।
टायर। यो कुनै आश्चर्य को रूप मा आउनु पर्छ जब म भन्छु कि इलेक्ट्रिक स्कूटर या त हावा भरिएको वा ठोस रबर टायर संग आउँछ। ट्रोटिनेट इलेक्ट्रीक एक ई स्कूटर को एक उदाहरण हो कि ठोस रबर टायर को उपयोग गर्दछ। ठोस टायर को लाभ यो हो कि उनीहरु फ्लैट प्राप्त गर्दैनन्। जे होस्, सवारी हावाले भरिएको टायर संग जस्तै सहज छैन। हावाले भरिएको टायर, अर्कोतर्फ, पct्क्चर हुन्छ तर एक अधिक आरामदायक सवारी प्रदान गर्दछ। फ्लैट टायर को समस्या वास्तव मा काफी सामान्य छ। त्यहाँ केहि सुझावहरु छन् कि तपाइँ अनुसरण गर्न सक्नुहुन्छ तपाइँको टायर को सपाट को जोखिम लाई कम गर्न को लागी, तर म त्यो अर्को पोस्ट मा छलफल गर्नेछु।
कुनै फरक पर्दैन टायर को प्रकार तपाइँको बिजुली स्कूटर को उपयोग गर्दछ, यो सामान्यतया सिफारिश गरीन्छ कि टायर सालाना प्रतिस्थापन गरीन्छ। यो मुख्यतया धागा लगाएको संग गर्न को लागी छ। पहिरिएका टायरहरु सडकमा पनी बस्दैनन् र दुर्घटना र चोट को जोखिम बढाउँछन्।
एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को आयु कसरी सुधार गर्ने?
मर्मत। नियमित रखरखाव इलेक्ट्रिक स्कूटर सहित लगभग कुनै पनि उपकरण, को आयु सुधार गर्न मा महत्वपूर्ण छ। सौभाग्य देखि, ई स्कूटर रखरखाव जटिल छैन, न त धेरै समय उपभोग। मँ एक छुट्टै पोस्ट मा अधिक विस्तार मा रखरखाव को बारे मा छलफल गर्नेछु, त्यसैले यस क्षण मा मात्र केहि मुख्य मुद्दाहरु को बारे मा कुरा गर्न दिन्छ। यो सामान्यतया सिफारिश गरीन्छ कि टायर दबाव एक साप्ताहिक आधारमा जाँच गरीन्छ। धूल बन्द र पखाला सुक्खा स्कूटर जब यो फोहोर वा गीला हुन्छ।
ब्याट्री। चूंकि आजको बिजुली स्कूटर मा प्रयोग ब्याट्री लिथियम आयन छन्, त्यहाँ एक धेरै धेरै छैन कि तपाइँ यसलाई ठीक संग राख्न को लागी गर्नु पर्छ। केवल केहि चीजहरु याद गर्नुहोस्। ब्याट्री चरम तापमान बाट टाढा राख्नुहोस्। ली-आयन ब्याट्रीहरु विशेष गरी उच्च तापमान को लागी संवेदनशील हुन्छन्। ब्याट्री पानी बाट टाढा राख्नुहोस्। वर्षा मा सवारी बाट बच्नुहोस्, तर यदि तपाइँ पनी हुनुहुन्छ, तब puddles बाट बच्न।
लुब। तपाइँ लगभग हरेक3महिना रोलिंग संयन्त्र lube गर्नुपर्छ। चिकनाई र तेल को लागी विशिष्ट समय सीमा वास्तव मा तपाइँको सवारी को स्थिति मा निर्भर गर्दछ। अधिक गंदगी र पानी तपाइँको ई स्कूटर को लागी उजागर भएको थियो, चाँडै तपाइँ यसलाई तेल गर्न को लागी आवश्यक छ।
भण्डारण। घर मा आफ्नो ई स्कूटर राख्नुहोस्, जब तपाइँ सक्नुहुन्छ। पहिले उल्लेख गरिए अनुसार, ई-स्कूटर उच्च तापमान वा पानी संग राम्रो संग जान सक्दैन। यी कारणहरु को लागी, उनीहरु लाई प्रत्यक्ष घाम र वर्षा बाट टाढा राख्नु पर्छ। म व्यक्तिगत रूप मा सामान्यतया एक सामयिक वर्षा झरी वा प्रत्यक्ष घाम को बारे मा धेरै चिन्ता गर्दैन, तर यो लगातार मेरो घाउ वा वर्षा मा मेरो trotinette electrique छोड्ने बानी छैन।
नट र बोल्ट। म सामान्यतया केहि नट र बोल्ट हर दुई महिना वा यति कडा। यदि म असमान सतह वा अफ रोड मा सवार हुन को लागी भयो, तब म घर पुग्ने बित्तिकै जडता जाँच गर्नेछु। यो शाब्दिक गर्न को लागी एक मिनेट भन्दा कम लाग्छ। केहि जटिल छैन।
सावधान सवारी। जसरी तपाइँ सवारी गर्नुहुन्छ तपाइँको ई-स्कूटर को दीर्घायु मा सीधा प्रभाव छ। कारण किन राइडशेयर स्कूटरहरु को एक मात्र केहि महिना को एक जीवन छ आंशिक रूप मा मानिसहरु लाई उनीहरु को सवारी को कारण हो। कोहि जान्दैनन् कसरी, अरुलाई मात्र परवाह छैन।
ई स्कूटर सवारी सुझावहरु:
लगातार गति मा सवारी, छिटो/धेरै धेरै decelerating बच्न
वर्षा वा हिउँ मा सवारी नगर्नुहोस्
असमान सतहहरु र potholes बाट बच्नुहोस्
तपाइँको ई स्कूटर ह्यान्डल गर्न सक्छ भन्दा धेरै वजन बोक्न
सवारी वा चरम तापमान (उच्च र कम) र वर्षा मा आफ्नो स्कूटर भण्डारण बाट बच्न
एक ई स्कूटर को भागहरु सजीलै घर मा तय गर्न सकिन्छ
जटिल मर्मत पेशेवरहरु को लागी सबै भन्दा राम्रो छोडिएको छ। सौभाग्य देखि, सबै भन्दा साधारण मुद्दाहरु कि प्रयोगकर्ताहरु भर आउछन् अपेक्षाकृत थोरै प्रयास संग घर मा तय गर्न सकिन्छ।
ढीला नट र बोल्ट सजिलै संग एक हेक्स रिंच कि तपाइँको ई स्कूटर संग आएर प्रयोग गरीएको हुन सक्छ। प्रक्रिया मात्र एक मिनेट लाग्छ।
ब्याट्री प्रतिस्थापन एक अपेक्षाकृत सामान्य घटना हो कि यो पनि सजीलै गर्न सकिन्छ। धेरैजसो इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु ब्याट्री आधार मा स्थित छ। तपाइँले गर्नु पर्ने सबै बेस प्लेट को स्क्रू हो, ब्याट्री अनप्लग गर्नुहोस्, एक नयाँ जोड्नुहोस् र बेस प्लेट बन्द गर्नुहोस्। यति नै।
रियर फेंडर प्रतिस्थापन एक सजिलो फिक्स हो, साथै। तपाइँको स्कूटर मा निर्भर गर्दछ, तपाइँ फेन्डर धारण गरीरहनुभएको छ कि 1-3 शिकंजा हटाउनु पर्छ। केहि मोडेलहरु मा तपाइँ पनि डिस्कनेक्ट गर्न को लागी हुन सक्छ र त्यसपछि पछाडिको प्रकाश लाई पुन: जोड्नुहोस्। समग्र प्रक्रिया सीधा अगाडि छ।
सपाट वा लगाएको टायरहरु पनि पेशेवर मद्दत बिना प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ, तर प्रक्रिया अलि बढी जटिल छ। म सुझाव दिन्छु कि तपाइँ एक अनुदेशात्मक भिडियो देख्नुहुन्छ कि टायर प्रतिस्थापन को प्रक्रिया को बारे मा विशेष गरी तपाइँको स्कूटर को मोडेल को लागी देख्नुहुन्छ।
मेरो trotinette इलेक्ट्रिक ड्यासबोर्ड
जब एक बिजुली स्कूटर को औसत आयु विचार, प्रमुख बिन्दुहरु मध्ये एक राम्रो तरिकाले स्कूटर प्रयोग गरीएको थियो र मर्मत गरिएको थियो विचार गर्न को लागी। जबकि शेयर ई-स्कूटर मात्र केहि महिना सम्म रहन सक्छ, व्यक्तिहरु जो आफ्नो निजी उपयोग को लागी एक किन्ने सोचमा छन्, आश्वस्त हुनु पर्छ कि सामान्य प्रयोग र नियमित रखरखाव संग एक इलेक्ट्रिक स्कूटर धेरै बर्ष सम्म रहने अपेक्षा गरिएको छ।
मँ लगभग दुई बर्ष को लागी मेरो trotinette electrique स्वामित्वमा छ र लगभग १००० माईल (१,५३० किमी) को यात्रा गरेको छु।
इलेक्ट्रिक स्कूटर म्यानुअल रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ?
बिजुली किक स्कूटर दिमाग मा एक कुरा संग विकसित गरीएको छ: उल्लेखनीय एक परम्परागत किक स्कूटर को मा सवारी सुधार गर्न। मानिसहरु जो बिजुली स्कूटर को उपयोग गर्दछन् किनकि उनीहरु चाँडै र सीमित थकान संग आफ्नो गन्तव्य मा पुग्न चाहान्छन्। यी कारणहरु को लागी, ई-स्कूटर म्यानुअल रूप मा लामो दूरी मा लात मारिएको मा इष्टतम छैन।
सबै इलेक्ट्रिक किक स्कूटर मैन्युअल रूप मा प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर सवारी ढिलो, असहज छ र तपाइँ छिट्टै थकित हुनुहुनेछ। अन्य शब्दहरुमा, ई स्कूटर समय को एक विस्तारित अवधि को लागी म्यानुअल संचालन को लागी सबै भन्दा राम्रो विकल्प होईन।
तपाइँहरु मध्ये को लागी जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर कहिल्यै सवार हुनुहुन्न र एक किन्ने सोचमा हुनुहुन्छ, सोच्दै कि यो दुबै म्यानुअल र बिजुली को शक्ति को सहायता संग प्रयोग गर्न सकिन्छ, मँ मात्र भन्न चाहन्छु कि इलेक्ट्रिक स्कूटर रमाईलो बाट टाढा छन्, वा व्यावहारिक जबकि। म्यानुअल रूपमा प्रयोग गरीन्छ। मैले एक परम्परागत किक स्कूटर धेरै पटक सवार छु, र उनीहरु धेरै रमाईलो छन् भनेर स्वीकार गर्नुपर्छ। तिनीहरू हल्का छन् र स्वतन्त्र रूपमा रोल गर्छन्। यो बिजुली स्कूटर, जो भारी र बोझीले मैन्युअल रूप मा संचालन गर्न को लागी मामला हैन। तिनीहरू दिमागमा एक फरक उद्देश्य संग डिजाइन गरीएको छ, र यो बिल्कुल ठीक छ।
परिस्थितिहरु मा एक बिजुली स्कूटर म्यानुअल रूप मा प्रयोग गर्न को लागी हुन सक्छ?
चाहे तपाइँ एक नियमित यात्रु हो, वा एक स्थानीय किराना पसल को लागी एक सामयिक छिटो र रमाईलो यात्रा को लागी तपाइँको ई-स्कूटर को उपयोग गर्नुहोस्, त्यहाँ एक समय आउन सक्छ जब तपाइँ यसलाई मैन्युअल रूप मा लात मार्न को लागी आवश्यक छ, वा अधिक संभावना, बस यो घर हिंड्न सक्नुहुन्छ।
मृत ब्याट्री। यो सायद सबैभन्दा सामान्य कारण हो कि ई-स्कूटर काम गर्न बन्द छ। लिथियम-आयन ब्याट्रीहरु आजको बिजुली स्कूटर मा प्रयोग गरीन्छ उच्च गुणस्तरीय र उच्च क्षमता छ, तर ती अन्ततः तपाइँको दुई-पाe्ग्रे को शक्ति को रस समाप्त हुनेछ।
इलेक्ट्रोनिक्स खराबी। एक ई स्कूटर मा, इलेक्ट्रोनिक्स विन्यास अत्यधिक जटिल छैन। जे होस्, यो कहिले काहिँ बिग्रन सक्छ र स्कूटरलाई ठीकसँग काम गर्न बाट रोक्न सक्छ। पानी को क्षति, लगाएको बिजुली तार, सबै प्रणाली मा एक सर्ट सर्किट को लागी नेतृत्व गर्न सक्छ, स्कूटर लाई अपर्याप्त प्रतिपादन।
ब्रेक समस्या। मँ कहिल्यै ब्रेक संग कुनै समस्या थिएन, तर मँ ब्रेक ढीला भयो र प्रयोगकर्ता आफ्नो सुरक्षा को खातिर स्कूटर धक्का थियो जहाँ परिस्थितिहरु को बारे मा सुनेको छु। कोहि पनि कुनै प्रकारको सवारी साधनमा सवार हुनुहुँदैन जसमा कुनै वा नराम्रो ब्रेक छैन। सौभाग्य देखि, ढीला भएको ब्रेक समायोजन एकदम सरल छ। तपाइँ मात्र हात मा काम को लागी सही उपकरणहरु को आवश्यकता छ।
ढीला ह्यान्डलबार। केहि ई स्कूटर मोडेलहरु मामूली डिजाइन त्रुटिहरु छन् कि सुरक्षा मुद्दाहरु लाई नेतृत्व गर्न सक्छ। यो बाहिर चलाउँछ कि ह्यान्डलबार तह तंत्र समय संग ढीला हुन जान्छ। मैले यो कहिल्यै अनुभव गरेको छैन, तर व्यक्तिगत रुपमा ती व्यक्तिहरु लाई थाहा छ जो उनीहरु संग भएको थियो। एउटा केटा आफ्नो इलेक्ट्रिक स्कूटर चढ्दै गर्दा फुटपाथमा ठोक्कियो, उसको ह्यान्डलबार ढिलो भयो। यो मुद्दा सजीलै उचित उपकरण संग तय गरीएको छ, तर यदि यो हुन्छ जब तपाइँ सवारी गर्दै हुनुहुन्छ, तब तपाइँ तुरुन्तै तपाइँको सवारी रोक्नु पर्छ।
सबै ई स्कूटर म्यानुअल प्रयोग गर्न सकिन्छ?
सिद्धान्त मा, सबै बिजुली किक स्कूटर म्यानुअल रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो तरीका हो कि उनीहरु लाई डिजाइन गरीएको छ द्वारा सही छ।
तपाइँ देख्नुहुन्छ, सवार को सुरक्षा बढाउन को लागी, बिजुली मोटर संग ग्यास थ्रोटल मात्र काम गर्दछ जब स्कूटर गतिमा छ। धेरैजसो मोडेलहरु कम्तीमा4mph (7 km/h) इलेक्ट्रिक मोटर संलग्न गर्न को लागी सार्नु पर्छ। तेसैले, क्रम मा ई स्कूटर चल्न सुरु गर्न को लागी, सवार पहिले किक वा यो धक्का, ग्यास थ्रोटल मा दबाव लागू गर्दा। एक वा दुई सेकेन्ड भित्र बिजुली मोटर काम गर्न थाल्छ र स्कूटर गति गर्न थाल्छ।
यो सुरक्षा संयन्त्र ई-स्कूटरहरुमा तैनात गरीएको छ स्कुटर को नजिकै उभिनेहरु लाई चोट रोक्न को लागी। कल्पना गर्नुहोस् कोही गल्तीले ग्याँस थ्रोटल थिच्दै स्कूटर सार्ने प्रयास गर्दा। यदि यो यो संयन्त्र को लागी भएको थिएन, ई-स्कूटर तुरुन्तै छिटो शुरू हुनेछ, सम्भावित यसको बाटो मा उभिने जो कोहिलाई हिर्काउने।
यो सुरक्षा सुविधा बजार मा उपलब्ध लगभग सबै बिजुली स्कूटरहरु मा आज उपलब्ध छ, यो सुरक्षित रूपमा मान्न सकिन्छ कि, हो, सबै इलेक्ट्रिक किक स्कूटर म्यानुअल रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ... कम से कम सिद्धान्त मा। मँ तल व्याख्या, उनीहरु सहज छैनन्, न त यात्रा को लामो दूरी को लागी मैन्युअल रूप मा प्रयोग गर्न को लागी सजिलो छ।
के लामो समय सम्म म्यानुअल उपयोग को लागी ई-स्कूटर अनुपयुक्त बनाउँछ?
जबकि ई-स्कूटर लात हान्न वा उनीहरुलाई अगाडि सार्न मैन्युअल रूप मा धकेल्न सकिन्छ, यो गर्न को लागी यो प्रक्रिया सजिलो छैन, न त रमाईलो छ, किनकि यो परम्परागत किक स्कूटर संग मामला हो।
तौल। इलेक्ट्रिक स्कूटरहरु को वजन मानक किक स्कूटरहरु को तुलना मा धेरै अधिक छ। वास्तव मा, औसत ई स्कूटर 15-35 किलो को एक मास छ, जो टाढा "प्रकाश" मानीरहेको छ। यो एक ई स्कूटर पुश गर्न को लागी धेरै गाह्रो छ, भाग मा यसको बढेको तौल को कारण।
प्रमुख घटक को एक जोडी ई-स्कूटर को समग्र वजन मा योगदान। मिश्र धातु फ्रेम, बिजुली मोटर (वा मोटर्स) र उच्च शक्ति लिथियम आयन ब्याट्री। दुर्भाग्यवश, सुविधाहरु कि प्रयोगकर्ताहरु स्कूटर भारी बनाउन चाहन्छन्। एक टिकाऊ भारी शुल्क फ्रेम काफी एक मानक एक भन्दा धेरै वजन हुनेछ। एक शक्तिशाली बिजुली मोटर (केहि ई स्कूटरहरु दुई मोटर्स छन्) अधिक शक्ति र उच्च गति को लागी एक कम शक्ति एक को तुलना मा एक उच्च मास हुनेछ। उच्च क्षमता को ब्याट्री कि यात्रा को एक लामो दायरा को लागी अनुमति दिन्छ धेरै कम वजन, एक कम गुणस्तरीय, कम पावर ब्याट्री को तुलना मा अधिक वजन हुनेछ।
ठूला पाels्ग्रा। धेरैजसो इलेक्ट्रिक स्कुटरहरुमा पाels्ग्राहरु अपेक्षाकृत ठूला छन्। तिनीहरू आकारमा ११ देखि १३ इन्च सम्म छन्, धेरै मोडेलहरुको लागी। यो विचार गर्नुहोस्, यदि तपाइँ ११ इन्च पाels्ग्रा संग एक ई स्कूटर को आधार प्लेट मा उभिरहनुभएको छ, तब तपाइँको खुट्टा जमिन भन्दा कम्तीमा ५ इन्च हुनेछ। मानौं एक औसत आधार प्लेट को बारे मा १ इन्च मोटी छ, तब यो मतलब छ कि तपाइँ जमिन माथि inches इन्च उभिरहनुभएको छ। यदि तपाइँ म्यानुअली ई स्कूटर किक गर्न को लागी प्रयास गर्नुहुन्छ, तब तपाइँको खुट्टा inches इन्च अलग हुनेछ। यस्तो स्थिति स्कूटर सुरु गर्न को लागी एक वा दुई किक को लागी उपेक्षा गर्न सकिन्छ, तर यसले तपाइँलाई थकित बनाउनेछ (विशेष गरी तपाइँको घुँडा) धेरै छिटो।
विद्युतीय मोटर। टायर सिधै बिजुली मोटर संग जोडिएको छ। त्यहाँ कुनै क्लच वा "तटस्थ" छैन। नतिजाको रूपमा, स्कूटर स्वतन्त्र रूपमा रोल गर्दैन। त्यहाँ विद्युतीय मोटर द्वारा प्रदान गरीएको प्रतिरोध छ जुन पल मा संचालित छैन। प्रतिरोध को मात्रा धेरै छैन यदि तपाइँ ई-स्कूटर केहि पटक धकेल्न को लागी प्रयास गर्नुहोस्, तर यो अपेक्षाकृत लामो "यात्राहरु" संग बोझिल हुन्छ।
कसरी एक बिजुली स्कूटर को दायरा विस्तार गर्न?
ब्याट्री मर्मत। एक स्वस्थ ब्याट्री अधिक शक्ति प्रदान गर्दछ, तपाइँ लामो दायरा दिँदै। सबै भन्दा पहिले, यो overheat नगर्नुहोस्। सामान्य मा लिथियम आयन ब्याट्री सबै भन्दा राम्रो around ° F (२५ ° C) को तापमान मा प्रयोग गरिन्छ। उच्च तापमान ब्याट्री को जीवन कटौती गर्न को लागी हुन्छ र अपेक्षित भन्दा छिटो प्रतिस्थापन को आवश्यकता मा परिणाम हुनेछ। कम तापमान ब्याट्री इलेक्ट्रिक मोटर लाई कम शक्ति प्रदान गर्न को लागी कारण हुनेछ। अन्य शब्दहरुमा, तापमान चरम बाट बच्न।
अतिरिक्त ब्याट्री। यदि एक दिइएको ई-स्कूटर एक कारखाना स्थापित ब्याट्री छ कि यो एक दायरा दिन्छ, उदाहरण को लागी, १२ माईल (२० किमी)। एक दोस्रो, समान ब्याट्री दायरा दोहोर्याउने छ? जवाफ छ: धेरै छैन, तर डबल को नजिक। एक आदर्श संसार मा, जवाफ हुनेछ "हो, दायरा दोब्बर हुनेछ", तर तपाइँ अतिरिक्त ब्याट्री को अतिरिक्त वजन (र ब्याट्रीहरु लाई हल्का छैन) लाई विचार गर्नु पर्छ।
मैले देखेको छु कि मानिसहरु आफ्नो ई-स्कूटरहरुमा एक दोस्रो ब्याट्री संलग्न। अरुले बाहिर निकाल्ने छनौट गरे कि ई स्कूटर मूल रूप बाट आएको थियो, र यसलाई एक अतिरिक्त क्षमता ब्याट्री संग बदल्नुहोस्। दुबै विकल्पहरु काम गर्दछन्, मात्र एक महान को रूप मा एक कल्पना गर्न सकीन्छ। विचार गर्न को लागी एक महत्वपूर्ण कारक यो हो कि ई स्कूटर को बिजुली प्रणाली (ब्याट्री सहित) को लागी कुनै पनी परिमार्जन, शून्य वारंटी मा परिणाम र हुनेछ। तेसैले, कृपया यो दिमागमा राख्नुहोस्, कुनै परिमार्जन गर्न को लागी प्रयास गर्नु अघि।
टायर दबाव। बस जस्तै कार मा, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर मा टायर को दबाव यात्रा को दायरा मा एक प्रभाव छ। प्रत्येक ई स्कूटर मोडेल फरक विशिष्टताहरु हुनेछ, त्यसैले तपाइँको उपकरण को लागी उचित मूल्यहरु को लागी मालिक को म्यानुअल जाँच गर्न निश्चित हुनुहोस्। कृपया ध्यान दिनुहोस्, यी मानहरु "पाउण्ड प्रति वर्ग इन्च" (PSI) मा दिइनेछ, अगाडि र पछाडि टायर को लागी फरक हुनेछ, र सवार को वजन को आधार मा फरक हुनेछ।
मेरो trotinette electrique को लागी, सिफारिश गरिएको इष्टतम दबाव मान निम्नानुसार छन्:
सवारको वजन: 50-70 किलो | अगाडि टायर: 35-40 psi | रियर टायर: 40-50 psi
सवारको वजन: 70-90 किलो | अगाडि टायर: 40-45 psi | रियर टायर: 45-55 psi
सवारको वजन: 90-100 किलो | अगाडि टायर: 45-50 psi | रियर टायर: 50-60 psi
सामान्य मा, एक कम psi तपाइँ एक चिकनी सवारी दिनेछ। उच्च साई भारी प्रयोगकर्ताहरु को लागी आवश्यक हुनेछ, तर टायर पct्क्चर को बढ्दो जोखिम संग सम्बन्धित छ।
यो एक साप्ताहिक आधारमा टायर दबाव जाँच गर्न सिफारिश गरीन्छ। अभ्यास मा, म सामान्यतया यो एक पटक हरेक तीन वा चार हप्ता गर्छु।
चाखलाग्दो, मैले भेटें कि यात्रा को सबैभन्दा लामो दायरा को आसपास ४५-५० psi को टायर दबाव संग थियो।
एक्सेलेरेशन जसरी तपाइँ आफ्नो ई स्कूटर चलाइरहनुभएको छ दूरी को दायरा मा एक काफी प्रभाव छ। क्रम मा दायरा विस्तार गर्न को लागी, तपाइँ एक स्थिर गति मा सवारी गर्नु पर्छ, एक औसत गति मा (धेरै छिटो जान बाट बच्न), र धेरै छिटो/decelerating बाट टाढा रहनुहोस्।
म जोड्न चाहन्छु कि केहि ई स्कूटर मोडेलहरु पुनर्जन्म ब्रेक संग सुसज्जित छन्। यो टेक्नोलोजी ब्याट्री चार्ज गर्न को लागी मानिन्छ जब ब्रेक लागू गरीन्छ। सबै ईमानदारी मा, मैले यो कुनै वास्तविक लाभ को लागी पाएको छैन। हुनसक्छ म गलत छु र केहि हराइरहेको छु, तर मेरो अनुभव को आधार मा, मँ अझै पनी यो कुनै पनि वास्तविक लाभ प्रदान गर्न को लागी पाउन को लागी।
थप पढ्नुहोस्: एक इलेक्ट्रिक स्कूटर को दायरा बढाउने मा व्यावहारिक सुझाव।
इलेक्ट्रिक स्कूटर छोटो दूरी यात्रा को एक महान र रमाईलो तरीका हो। म शाब्दिक रूपमा उनीहरु को बारे मा पर्याप्त राम्रो चीजहरु भन्न सक्दिन, कि म उनीहरु लाई सवारी को लागी कती धेरै आनन्द लिन्छु। विगतमा, मैले कहिल्यै सोचेको थिइनँ कि मँ कहिल्यै कुनै चीजको लागी कार खाईदिन्छु।
अघिल्लो: एलजी लिथियम ब्याट्री इलेक्ट्रिक स्कूटर १३ इन्च बिजुली स्कूटर वयस्क
अर्को: सस्तो 84v इलेक्ट्रिक स्कूटर 20000w थोक speedway इलेक्ट्रिक स्कूटर
दोहोरो मोटर इलेक्ट्रिक स्कूटर Electric इलेक्ट्रिक स्कूटर ， इलेक्ट्रिक साइकल 15000w किन्नुहोस्
तातो बिक्री दुई पाels्ग्रा १३ इन्च आत्म सन्तुलन ...
84v छिटो 20000w 13inch इलेक्ट्रिक स्कूटर ebike एफ ...
84v तह इलेक्ट्रिक साइकल 15000w इलेक्ट्रिक sc ...
15000W-20000w Brushless इलेक्ट्रिक स्कूटर, वयस्क ...
अमेरिकी bicicleta electrica २ पाels्ग्रा बिजुली ...